Nezvedu - Ningbo Pntek Technology Co., Ltd.
Tiri iri Ningbo guta, Zhejiang dunhu. Isu tiri nyanzvi yekutengesa mapaipi epurasitiki, zvigadzirwa uye mavhavha ane makore mazhinji achiburitsa ruzivo. Zvigadzirwa zvekambani yedu zvikuru ndezve: UPVC, CPVC, PPR, HDPE pombi uye zvigadzirwa, mavhavha, masisitimu ekusasa uye mita yemvura izvo zvese zvakagadzirwa zvakakwana neyemberi michina uye yakanaka mhando zvigadzirwa uye zvakanyanya kushandiswa mune zvekurima kudiridza uye kuvaka.
Shandisa sainzi kubatsira vanhu, shandisa tekinoroji kutungamira hupenyu
Vashandi veNingbo Pntek vachashandisa capital sekubatanidza, sainzi uye tekinoroji sekutsigira, uye musika semutakuri, kutamba chinzvimbo chechikwiriso uye R & D nzvimbo pahwaro hwepurasitiki pombi indasitiri mutsetse, shandisa iyo inozivikanwa brand brand, chiyero chekuwedzera zano uye zano rekuvandudza. Iyo nyowani yechigadzirwa yekuvandudza zano ye "yakakwira, nyowani uye yakapinza" inoita kuti zvigadzirwa zvive zvakasiyana.
Kubva pakagadzwa kambani uye gara uchiita zvatinogona kugutsa zvingangodiwa zvevatengi vedu.
Nhanho imwe neimwe yekugadzira kwedu michina inoenderana neyepasi rose chiyero che ISO9001: 2000.
Kambani yedu ine moyo wepachokwadi inoda kushandira pamwe nemabhizinesi epasirese kuti vabudirire kuhwina-kuhwina mamiriro.
Ningbo Pntek inopa kukosha kweiyo mhando uye vatengi vedu uye yakawana kuonga kubva kune vaviri kumba nekune dzimwe nyika.
Isu tinotora varume senheyo uye tinounganidza boka repamusoro revashandi vekiyi vakanyatsodzidziswa uye vanoita zvemabhizimusi emazuva ano manejimendi, kusimudzira chigadzirwa, kudzora mhando uye tekinoroji yekugadzira.
Chinangwa chedu ndechekuwana kuvimbika kwevatengi vedu uye nekudzokorora bhizinesi nekupa zvigadzirwa zvemhando yepamusoro pamitengo yemakwikwi Kuchengeta yakakwira kwazvo danho rebasa revatengi.
Zvigadzirwa zvedu zvinotumirwa kuSouth Africa, Middle East, Southeast Asia, South Asia, Central Asia, Russia, South America, North Africa, Middle Africa nedzimwe nzvimbo nematunhu.